Ihotele iyathengiswa eWakiso, kuMbindi woMbindi
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Hotels Ummandla oMbindi Wakiso
I-1-10 yoluhlu lwe-15
Ihotele iyathengiswa e-Kulambilo
Ibhloko yezorhwebo iyathengiswa eKulambilo nge-b1.2B ebekwe ubungakanani bomhlaba enesiqingatha se-acre, ziyi-10 nganye inegumbi elinamagumbi amabini, ikhitshi, indawo yokutyela kunye nesauna, iholo yokuthengisa, indawo enkulu, indawo yokupaka iimoto ezingama-2.
umbono Hotels ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
Ihotele iyathengiswa eNkumba
Ihotele iyathengiswa eNkumba kwi-1.2b ebekwe kubungakanani bomhlaba ozii-38decimals ngengeniso yenyanga ye-18M, ziiyunithi ezi-8 ezinokuhlala, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ukhuseleko oluluqilima, indawo evaliweyo kunye nocingo olunomhlaba wabucala we-mailo ulungile.
Ihotele iyathengiswa e-Entebbe
Ihotele iyathengiswa e-Entebbe kwii-900kdollars ezikumgangatho wobukhulu beedesika ezingama-70 ezinendawo yokulala enendawo ezi-14, iiphuli ezimbini zokuqubha, igumbi lenkomfa, ibha, indawo yokuzivocavoca, indawo enkulu yokupaka, indawo enkulu yokupaka, ukhuseleko oluqinileyo nocingo.
Ihotele eziyi-14 zee-hot Suthi iyathengiswa e-Entebbe, ineephuli ezimbini zokuqubha, ingqungquthela, kunye nemivalo kwiidesika ezingama-2. Ixabiso ngu-Usd 70. Sitsalele kule nombolo: 800,000/0414662954 / 0753100355 ucwangcise ixesha lokujonga.
Ihotele ezingama-53 igumbi lokuthengisa kwidolophu yase-Entebbe, yenza ingeniso yenyanga ka-Usd 70,000. yakhelwe kwi-decimals engama-80 kwindawo elungelelene kakuhle ephuhlileyo enephuli yokubhukuda. Ixabiso ngu-Usd 4M. Sitsalele kule nombolo: 0414662954, 0753100355 okanye 0774755146 ucwangcise ixesha lokujonga.
Ihotele iyathengiswa eBweyogerere
Ihotele ezithengiswayo elikwindawo ephuhliswe kakuhle enabemi abalungileyo kunye nokhuseleko olufanelekileyo eBweyogerere inamagumbi angama-30 abekwe kwisibhengezo esingama-50 esenza amawaka ezigidi ezili-10 acela iidola ezisisi-1.2 samawaka ezigidi kunye nesihloko somhlaba sabucala saseMailo.
Indawo yokutyikitya kunye nehotele ebekwe kwindawo ephuculweyo enokhuseleko oluhle eBweyogerere enamagumbi angama-35 amagumbi ama-6 kunye nendawo ezingama-30 zokupaka izithuthi ezibuza i-2.8m usd.
Ihotele iyathengiswa eGaba
Ihotele iyathengiswa ekwindawo ephuhliswe kakuhle enokhuseleko olufanelekileyo kunye nommelwane oyintloko kwindawo yaseGaba ehleli kwisiteyimenti ezingama-35 ngeivenkile ngexabiso lokuthengisa le-Usd 450000
Ihotele ise-Entebbe, kwaye le Ihotele ibekwe phakathi kwezona zihamba phambili e-Entebbe kunye nasekhaya kunamalungu amaninzi abasebenzi, umbutho wombutho kunye nabasebenzi beArhente yoNcedo. Isikhululo seenqwelomoya Jonga ihotele ngumnini osetyenziswayo, igumbi lokulala eli-18 kunye namanye amagumbi ali-18 asakhiwayo. Ihotele ehleli kwindawo eyi-1.54 Acre. nanku ...
I-HOTEL IN ENTEBBEITS I-QUICK SALE10 amagumbi ehotele asebenzayo (Usd 70-100 / ebusuku) amagumbi e-10 asakhiwa (jonga loo flethi) Kwii-1.4 iihektare ezinombono wedolophu. I-1km kuphela ukusuka kwinqanaba likaNkumba. Kwi-800 yezigidi zeerandi zokugqibela.